स्त्री एकान्त/मेरी आमा | नेपाली पब्लिक स्त्री एकान्त/मेरी आमा | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७५, २९ चैत्र शुक्रबार १९:४५
रोशन थापा ‘नीरव’
माथिको शीर्षक राख्दा मैले धेरै समय सोचमा लगाएको छु। यसको कारण अरूका लागि ठूलो र व्यापक नहोला तर मेरालागि ठूलो नभए पनि केही अन्तरङ्ग र आन्तरिक भने भएको छ। मैले आफ्नो बाल्यकालमा आप्mनी माताको एकान्त देखेको छु। देखेर त टाउको खियाउनुपर्ने केही छैन, तैपनि त्यो एकान्तको परिभाषा आजसम्म पनि मैले दिन सकेको छैन, यसकारण पनि हो। राति, मध्यरातमा आफ्ना सानासाना सन्तानलाई अभावको सक्दो खाना खुवाएर आफ्ना पुरुषको प्रतीक्षामा त्रसित समय भोग्नु भनेकै यथार्थमा स्त्री एकान्त रहेछजस्तो लागेर आएको छ यतिबेला।
यो तत्कालीन नेपाली समय–सन्दर्भको कुरा हो, जुन त्यतिबेला नबुझिएको कुरो भए पनि यतिबेला भने बुझ्न सक्षम हुँदा, केही खुट्ट्याउन सकिँदो हो र अनेक अर्थहीन अर्थलाई यो त यो पो रहेछ भन्न सकिने रहेछ अर्थात् नेपाली समाजमा कतिपय अवस्थामा हुने मातापिताको रडाको एक मिथक लागे पनि यथार्थको त्यो दृश्य केही नजानिँदो र केही अथाहमूलक घाउ हुँदो रहेछ सन्तानलाई, कतिपय अवस्थैमा पनि अपरिभाषित रूपले स्मृतिको पुनरावृत्ति बनेर बस्दो रहेछ। अनि त्यही पुनरावृत्ति नचाहँदा नचाहँदै पनि बोक्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जीवनभोगाइको अनागत परिस्थितिले अँगालेपछि अहिले बुझ्ने केही प्रतिशत उक्लाइमा छु जस्तो लाग्छ मलाई।
हुन त यस्तो प्रसङ्गमा कतिले के देख्दा हुन्, कुन्नि। मैले जे देखेको हुँ, त्यतिबेला केही खुट्ट्याउन सक्ने स्थितिको नभए पनि आजको यस स्थितिमा आएर के लाग्दछ भने त्यस अतीतीय भनूँ विगतीय चित्रपटमा छायाङ्कित पात्र अर्थात् पिताको क्रोधभित्र माताको असह्य वेदना वा आँसु विलित भएको देख्नु पनि त्यतिबेला जे भए पनि यतिबेला भने स्त्री एकान्त नै हो भन्ने लागेर आउँछ अर्थात् एक प्रकारको आभ्यान्तरिक पीडाको असहनीय नारीस्थितिको पर्याय यही हो।
यो यतिबेलाको मेरो उपमा होइन, न कुनै बुद्धिविलासित विशेषण नै हो। हो के भने जति नै उमेरले नेटो काटे पनि आमा आमा नै हुन्। आमा नहुनु केही हुनु छैन। आमा छिन् र त आमाका विशाल पीडा अहिले बुझ्न समर्थ भएको छु। त्यही समर्थ बुझाइको केन्द्र मेरी आमा छिन् र छन् उनका पीडाका अनेक पात्रताहरू, जसलाई सँँच्चैसाँच्चै म चलचित्रीकरण गर्न कदापि सक्ने छैन। एकान्तबोध बारम्बार गर्दछु र केही पीडाको सरणि मुटुको कुनै केन्द्रभित्र आफैँ सर्र उम्रेको बोध हुन्छ।
अब यतिबेला मेरा पिता छैनन्। महाप्रस्थानको यात्रामा विलीन भएको चौवार्षिक अवधि पूर्ण भएको छ। यस्तोमा आफ्ना असाध्य रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै, दुई धारतिर बगिरहेका आफ्ना सन्तान र तिनीहरूका वंशजलाई हेर्दै, त्यो शल्यक्रियागत आँखाको मधुरो दृष्टि फलकबाट हेर्नु सधैँ घरको कौसीमा बसेर आफ्नो एकाकी जीवनको अपरिभाषित समय कटान गर्नु मेरी माताको कुनै सजाय वा धर्मनिर्णित भोगाइ त पक्कै पनि होइन, हुँदै होइन तर यसलाई के भन्ने त?
यो प्रश्न बारम्बार मैले आफ्नो ऐकान्तिक स्थितिमा भोग्ने गरेको छु। यसैले मलाई लागेको यो पनि एक प्रकारको स्त्री एकान्त नै हो। पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। जीवनका अनेक उकालीओराली सँगसँगै यात्रारत रहिरहेको बेला एक्कासि आफ्नो सहयात्रीलाई हराउनु योभन्दा ठूलो पीडा के होला र जीवनमा? मेरी आमाले भन्न नसकेका यी कुरा उनका अश्रुपूरित नेत्रभरिभरि देखेको छु। योजस्तो ठूलो पीडाको अनन्त एकान्त भोगाइ अरू के होला र मेरी आमाका लागि? अपरिभाष्य यो नियतिको पर्याय नै सम्भवतः स्त्री एकान्त हो।
यी वैयक्तिक भावना यतिबेला मेरा शब्दमा किन पसेको भनेर कसैले भने पनि वा नभने पनि म आफूलाई चाहिँ यसकारण हो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो एकान्त अमूक हुन्छ। मातालाई बाटाको किनारमा पुत्र सँगसँगै नातिनातिनालाई एक पटक हेर्ने लालसासहित आफ्ना अनेक रोगबाट गलित अनुहारमा उभिरहेको भेट्छु। त्यतिबेलासम्म पनि मैले माताको यो क्रियाकलापलाई केही भन्न सकेको छैन वा भनूँ अर्थ्याउन सकेको छैन। बरु मध्यरातमा माताको अनुहार चित्रित गर्दै निद्रित आँखामा केही भन्ने वा उपाय खुट्ट्याउने जोहोमा यति भन्न सक्छु, माताको अनुहारमा एकाकी जीवनको एकलासे क्षणक्षणका अज्ञात त्रासहरूले डामेका रहेछन्। अनि लाग्न थाल्छ, यही त हो स्त्री एकान्त भनेको।
यी कवितासँग भाविक वाक्यांश ममा एक्कासि उम्रिएका होइनन् तर यो के हो भनेर भन्ने तर्क अझ पनि मलाई ठेट लागेको छैन, भनूँ प्राप्त भएको छैन। यसो हुनाको कारण केही होइन पाठकवृन्द। केही समयदेखि मेरो कोठामा बोराभित्र कोचिएका पुस्तक मिलाउने क्रममा एउटा ‘सोच’ भन्ने हिन्दी पत्रिका पाएर पढ्न थालेको, त्यसमा रहेका अन्य लेखरचनाभन्दा एउटा कवितामा मेरो ध्यान अड्किरहेर हो। शुभा नाम गरेको कवयित्रीको स्त्री विषयक दुइटा कविता प्रकाशित छन्। शुभा नर हो वा नारी कतै परिचय खुट्टिएको छैन तर कविताको विषय र भावले पक्कै पनि नारी भन्ने लागेको छ। कविता यस्तो ढङ्गमा अनुवाद गर्न म बाध्य भएँ…
यसपछि? यसपछि कविताको झल्को त समाप्त भएको छ तर रन्को भने यथावत्, धेरै समयसम्म रन्की नै रहेको भान परेको छ। मथिङ्गललाई एकटक स्थिर पारेर सोच्न थाल्छु र केही अर्थलाई आफैँभित्र प्रेषित गर्न थाल्छु, यसरी… … युगौँदेखि स्त्रीको स्थिति विभिन्न ढङ्गमा चित्रित भएर आइरहेकै छ। ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’जस्ता महावाणीदेखि नारीवादी सोचसम्मका छलफलहरू देखिँदै, पढिँदै आइएकै हो। यसमा मेरो अल्पज्ञानले धेरै बहस गर्न मानेको छैन, तर यो ‘स्त्री एकान्त’ उपमाले भने धेरै नै सोच्न बाध्य पारेको छ।
म यो भन्छु, मेरो यो बाध्यकारी स्थिति अरू सबैलाई पनि बाध्यकारी नै बनाउँछ भन्ने मेरो कुनै प्रत्याभूतिमूलक ढिपी छैन। मेरो अल्पज्ञान र अल्पभावनाले यति शब्द कोर्न बाध्य भएको भने हुँ। यस कवितामा, अब थाहा लागेको छ मेरी माताको उहिल्यैउहिल्यै पिताको पर्खाइको प्रक्रियाको शाब्दिक अर्थ रहेछ। स्त्री एकान्त यही रहेछ। अब अहिले मेरा पिताको अभावमा मेरी माताले कसलाई यसरी कुरिरहेको, शून्यमा के खोजिरहेको, पीडामा विवशताको अनेक क्षणसँग के भोगिरहेको? भन्ने प्रश्नहरूले मलाई धेरै सोच्न बाध्य बनाएको छ, यो सत्य हो र यसै सत्यतामा के पनि लागेको छ भने यी सबै निश्चय पनि स्त्री एकान्तको दुख्तो उपमा हुन्।
मेरी माताले, अहिले थाहा पाएको छु, यथार्थमा यस्तै स्त्री एकान्त पो भोगिरहेको। पीडासँग बाँच्नु एकान्तको यस्तै प्रक्रिया त रहेछ नि, त्यो पनि अनागत क्षणको आत्मसात् अपरिभाष्य परिस्थितिबाट अर्जित भएर। मलाई लाग्छ, अब म कविताको यो भावभन्दा पर जान सक्ने छैन र त्यसको अर्थतात्त्विक गर्तभित्र पसेर मेरी माताको एकाकी जीवनको कुनै शब्दखोलुवा परिभाषा दिन सक्ने छैन, पक्कै पनि पाठकवृन्द। मेरो चिन्तना यति हो, माथिको कविताका पङ्क्तिसँगै मेरी माता अझै त्यस्तै विशाल एकलासे जीवन भोगिरहेकी छन्। त्यसैलाई नै सम्भवतः स्त्री एकान्त भनिँदो रहेछ। एउटा विराट् शून्यता जस्तो स्त्री एकान्त।
आमा, तिमीलाई करोडौँ सलाम।
रोशन थापा नीरव